UNgqongqoshe ufuna ukulekelela | News24
UNgqongqoshe ufuna ukulekelela
UNkk Belinda Scott ngesikhathi ehambele imijondolo yaKwaJika-Joe ngoLwesine olwedlule.isithombe: lethiwe makhanya
UNGQONGQOSHE wezeziMali uNkk Belinda Scott uzwakalise ukuphoxeka ngesimo semijondolo ehlala abantu KwaJika-Joe.
UNkk Scott uvakashele le ndawo ngoLwesine olwedlule mhlaka-3 kuNhlaba (May) eyohlola isimo aphinde azise abahlali ukuthi sebelaphi nezinhlelo zokubalekelela ekutheni bathole izindlu ezisesimweni ngemuva kokuzibophezela ukuthi uzobasiza ngoNtulikazi (July) wangonyaka odlule.
UNkk Scott wayevakashele le ndawo ngonyaka ophelile nalapho ayehambisana khona neminyango eyahlukene okubalwa kuyona uMnyango wezekuThuthukiswa koMphakathi, wezeMfundo, wezeMpilo, wezeZindlu, uMkhandlu uMgungundlovu kanye noMasipala uMsunduzi.
NgoLwesine uNkk Scott wezwakalise ukungenami ngesimo sakule ndawo nasichaze njengesethusayo nesingafanele engabe sihlala abantu.
Uthe: “Kungephula inhliziyo ukubona abantu bephila ngale ndlela ikakhulukazi labo abahlala nezingane ezincane.
“Kunokuba isimo sibe ngcono siya ngokuba nzima kakhulu. Abantu basebenzisa izindlu zangasese ezizodwa nazo ezingahlanzekile. Siyathusa isimo sakulendawo. Angazi ukuthi abantu abahlala lana baphila kanjani,” kubeka yena.
Uphinde wakhala ngesimo sezempilo njengoba kunodoti ohleli eduze kwalemijondolo ongaqoqwa onephunga elingabekezeleleki.
UNkk Scott ube nomhlangano nayo yonke iminyango ethintekayo ukuzwa ukuthi isihambe yagcinaphi nezinhlelo zayo zokulekelela abantu bakule ndawo. Kulo mhlangano uNkk Scott uthe kungaba ngcono uma kungenziwa i-war room trailor yabantu baKwaJika-Joe njengendlela yokwehlisa abahlali kulo kungcola abaphoqeleke ukuba bahlale kubona.
Indawo yaKwaJika-Joe ikhungethwe inkinga yezindlu ezingekho esimweni, ukungahlanzeki, ukungabikho kwemisebenzi kanjalo nogesi wezinyokanyoka nosudale izingozi ezingi ngaphambilini kubalwa ukusha kwemizi kanye nokushona kwabantu beshokhwa yiwona lo gesi.
Ikhansela le ndawo uMnuz Nkululeko Mkhize uthe uhlelo lokwakhiwa kwezindlu lwehlukene izigaba ezimbili ngokwemibiko ayithola kwabezokuHlaliswa kwaBantu kaMasipala uMsunduzi.
“Njangamanje kwakhiwa ama-flat okuhloswe ukuqashiswa kuwo. Imali ezokhokhwa ngokwalolu hlelo isukela ku-R800- R3500. Labo abangakwazi ukukhokha i-rent bona umasipala uzobahlinzeka ngezindlu zomxhaso [RDP houses] ezindaweni lapho uMkhandlu wakha khona izindlu zomxhaso,” kubeka yena.